Mandroseza : Tovovavy 18 taona maty voahitsaky ny lamasinina
Nirotsaka ny ranomason-dRamatoa Randiantsoa Rosefine Fanja, 45 taona, renim-pianakaviana monina eny Mandroseza ary vao maty vady tamin’ny Paska teo.
Maty voahitsaky ny lamasinina teny andrefan’ny gara eny Mandroseza, afak’omaly alina, tamin’ny 8 ora sy sasany alina ny zanany vavy vao 18 taona. Efa nisy nanatitra tany amin’ny tranom-paty izay vao nisy nilaza taminy ity loza ity.
« Izaho, tamin’io, niandry ny mararin’ny mpampiasa ahy tato amin’ny Hjra. Ny namany no nikaroka azy ka nilaza tamiko fa aty amin’ny tranom-paty izy. Tsy fantatro izay nahazo azy. Isak’alina izy, mivoaka any, miverina ihany rehefa maraina. Niala tao an-trano izy tamin’ny 7 ora hariva fa tsy nimpody intsony », hoy i Fanja nitomany.
Teo akaikin’ny gara ao Mandroseza, amin’ny lalana mankany Mahazoarivo, mifanakaiky amin’ny trano fonenan-dry zareo ihany no nitrangan’ny loza. Misy maratra ny tratra sy ny lohan’ilay zazavavy, izay maty tsy tra-drano. « Asa izay nitranga tamin’io alina io fa mpivoaka alina io zazavavy io, miaraka amin’ny namany. Tsy mazava izay nahatonga azy ho voafoakan’ny lamasinina », hoy Ratsimba Grégoire, sefo fokontany ao Mandroseza. « Izy isan’andro no mpividy ny sakafo sy mpikarakara ny ao an-tranonay, ankoatra ny asa an-tselika izay hahitany vola handoavana ny hofan-tranonay », hoy Randriantsoa Rosefine Fanja niteraka enina mianadahy.
1.Posté par romine le 02/09/2015 17:07
Pourriez-vous me contacte sur l'adresse mail suivant: romine.rivelo@gmail.com
j'ai quelques questions a propos de cette article.